अर्थ/बाणिज्य – samyantra.com
उत्तम पोख्रेल । मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ६ ले सत प्रतिशत काम सकेको छ । वडाले २७ वटा योजना छनोट गरेकोमा सवै काम सकिएको वडा समितिको कार्यालयले जनाएको छ । २५ लाखका २ वटा योजना तथा अन्य २५ वटा योजना सम्पन्न गरी सकेको वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष उदय वहादुर राई (राजु)ले बताए । सम्पन्न भएका योजनाहरुमा डेढ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेति हुने गरी धैति खोला बांंध, सोमबारे बजारलाई ब्यबस्थित गर्नक...
केशु विरही, बेलबारी, माेरङ/ बेलबारी नगरपालिकाकाे दाेश्राे नगरसभा अधिवेसनले अा.व. २०७५/७६ का लागि ८० कराेड वरावरकाे वजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदी सभाध्यक्ष रहेको नगरसभा अधिवेसनमा उपमेयर ढाकाकुमारी पराजुलीले अा.व. २०७५/७६ काे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भाैतिक पुर्वाधारमा विशेष महत्व दिएर प्रस्तुत गरिएको बजेटमा...
प्रदेश १ को सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले शुक्रबार प्रदेशसभामा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपयाँ र पूँजीगत खर्च १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपयाँ बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले २ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा केन्द...
देशमा सरकारले सिपमुलक तालिम नदिएका कारण बिदेशमा गएर दुख गर्नु पर्ने भन्दै तिब्र आलोचना भईरहेका बेला बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ ले युवाहरुलाइ ड्राईभिङ तालिम दिएको छ । रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम अन्तरगत १८ जना युवालाई एकै पटक ड्राईभिङ तालिम दिएको वडा अध्यक्ष सुवेदीले बताए । आगामी ५ बर्ष भित्रमा बेरोजगारको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएका छौंं - बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष योगेन्...
रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रेशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु भिवोर क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ । उक्त कार्यको लागि रैराङ हाइड्रोपार डेभलपमेन्ट कम्पनी र भिवोर क्यापिटल बिच बिहीबार सम्झौता भएको हो । रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट सो कम्पनीका कार्यकारी संचालन गुरु प्रसाद न्यौपाने र भिवोर क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट सो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि ...
सरकारले आउंदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि १३ खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी व...
उत्तम पोख्रेल, बेलबारी / बेलबारी नगरपालिकाले गाउँ र टोल टोलमा गएर उद्योग दर्ता तथा नवीकरण गर्न थालेको छ । मगलबारदेखि दर्ता गर्न छुटेका पसलहरुको नगरपालिकाले नविकरण गर्न थालेको हो । नबिकरण तथा दर्ता गर्न आँउदा ब्यापार ब्याबसायमा असर पर्ने भएकाले नगरपालिकाले सहयोग गरको बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गणेश प्रसाद दाहालले बताए । चिया पसलदेखि ठुला उद्योगहरु दर्ता गर्न छुटेका हुन सक्छन् ,...
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बनेपाको चारदोबाटोमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । सोमबार (वैशाख २४ गते) कम्पनीका अध्यक्ष श्री प्रदिप जंग पाण्डे ज्यूले शाखाको समुद्घाटन गर्नु भयो । उहांले कम्पनीले हाल सम्म गरेको उपलव्धी र भावी कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न ग्राहकको आवश्यता अनुरुपको नविनतम योजनाहरु ल्याएर कम्पनीलाई सेवा मुखी वनाउने कुरामा जोड दिनु भयो । समुद्घाटन कार्यकम्रमा कम...